Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. तीन हजार किसान माछामा आश्रित – Emountain TV
काठमाडौं, ११ असार । माछा पकेट क्षेत्र मानिएको रुपन्देहीको दयानगरमा तीन हजारभन्दा बढी किसानले माछा बेचेर जीवन गुजारा गर्दै आएका छन् ।
दयानगरका विभिन्न १७ वटा कृषक समूहमा ती किसान आबद्ध छन् । ५६० घरधुरीका तीन हजार ३६० जना माछापालन व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको जलदेवी मत्स्य विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
यहाँका पोखरीबाट हरेक मौसममा दैनिक १० क्विन्टलसम्म माछा निकासी हुने गरेको र प्रतिघरधुरी मासिक दुई लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । माछापालनका लागि गाउँमै दाना उद्योग स्थापना भएको छ । पर्यटकको आगमन बढेपछि यहाँ होमस्टे (घरबास) र मत्स्यपालन केन्द्र खुलेका छन् ।
घरघरमा माछापालन हुन थालेपछि दयानगरको छपियालाई मत्स्य पर्यटन केन्द्र बनाउन अभियान नै थालिएको छ । सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकाले माछापालन व्यवसायलाई पर्यटनसँग जोडेर अभियान नै चलाएका छन् । अहिले दयानगर पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले थालेको अभियानअन्तर्गत पर्यटकलाई माछापोखरीमा घुमाउने, माछासँग बल्छी खेल्न दिने, माछाका परिकार खुवाउने गरिएको छ ।
ध्यानगर क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक एक हजार टन माछा बिक्री हुने गरेको छ । यहाँका सबै किसानको आम्दानी जोड्ने हो भने करिब वार्षिक २५ करोड रुपियाँ हुन आउँछ, जलदेवी मत्स्य विकास सहकारी संस्थाका प्रेमबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार दयानगरबाट वार्षिक एक हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । किसानले उत्पादन गरेका माछा दैनिक छ क्विन्टलका दरले बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, पोखरा, काठमाडौँ निर्यात गरिन्छ । परम्परागत रूपमा अन्न बाली गर्ने किसानले अभियानमुखी माछापालन थालेपछि जिल्लाको दयानगर माछापालनका लागि देशमै नमुना क्षेत्र बनेको छ । करिब ३५ वर्षदेखि माछापालन थालिएको दयानगरमा दस वर्षअघि अभियानमुखी माछा उत्पादन कार्यक्रम थालिएको हो ।
दयानगरको १६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक हजार २०० पोखरी निर्माण गरी माछापालन गरिएको छ । यहाँ रहु, नैनी, सिल्भर कार्प, कमन कार्प, बिगहेड कार्प, ग्रास कार्पलगायतका माछाका प्रजाति पालिएको छ । एक कट्ठादेखि तीन बिघासम्मका पोखरी बनाइएका छन् । प्रतिकट्ठा ३०० माछाका भुरा एकै जातका र ४०० भुरा विभिन्न जातका मिलाएर राख्ने गरिन्छ । भुरा पोखरीमा राखेपछि तीन÷चार महिनामै खानयोग्य हुन्छन् । भुरा हालेको छ महिनापछि मात्र माछा बिक्री गरिन्छ ।
कृषक समूह र सहकारीले वर्षभरि नै माछा उत्पादन र व्यावसायिकतामा सहयोग गर्ने गरेको मत्स्य व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । यहाँका पोखरीबाट हरेक मौसममा दैनिक १० क्विन्टलसम्म माछा निकासी हुने गरेको र प्रतिघरधुरी मासिक दुई लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । गाउँमै दाना उद्योग स्थापना भएको छ । पर्यटकको आगमन बढेपछि यहाँ होमस्टे ९घरबास० र मत्स्यपालन केन्द्र खुलेका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।